Caddaaladda Restorative (RJ) waa aragti caddaaladdeed
taasi waxay xoojineysaa hagaajinta dhaawaca
waxaa abuuray danbi iyo isku dhac.
Caddaaladda Restorative waxay weydiisaa:
Waa maxay waxyeelada la sameeyay?
Maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si loo hagaajiyo dhaawaca?
Ayaa mas'uul ka ah dayactirkan?
Barnaamijyada Burlington CJC waxay ku shaqeeyaan
Mabaadiida Caddaaladda iyo falsafadaha.
DANBIGU WAA XADGUDUB DADKA IYO XIRIIRADA.
In kasta oo dembigu xadgudub ku yahay sharciga - fal ka dhan ah gobolka - haddana waxa ugu weyn ee aannu ka walwalsanahay waa saamaynta jidheed, shucuureed, iyo bulsheed ee dembigu ku leeyahay dadka iyo xidhiidhada.
Dembigu wuxuu waxyeeleeyaa oo saameeyaa dadka - dhibbanayaasha, xubnaha qoyska, xubnaha bulshada, dembiilayaasha, iyo kuwa kale - wuxuu waxyeelleeyaa xiriirka, wuxuuna carqaladeeyaa nabadda bulshada.
XADGUDUBYADA AYAA SAMEEYA WAAJIBAAD.
Xaalad kastaa way adag tahay waxayna abuurtaa waajibaadyo ah hagaajinta waxyeelada iyo in wax loo saxo sida ugu macquulsan, sida ay qeexeen dhammaan dhinacyada.
Dembiilayaashu waxay leeyihiin masuuliyad ku saabsan ficilladooda - si ay u fahmaan sida ay ficilladoodu u saameeyeen kuwa kale, inay wax ka beddelaan, iyo inay bartaan siyaabo looga fogaado dembiga dambe.
Bulshadu waxay masuuliyad ka saarantahay xubnaheeda, oo ay kujirto taageerida baahiyaha dhibanayaasha iyo masuuliyada dambiilayaasha inay wax ka qabtaan dhibaatada ay geysteen.
CADDAALADDA SOO CELINTA WAXAY QAADATAA DHIBANAYAASHA, DAMBIILAYAASHA, IYO XUBNAHA BULSHADA - DHAMMAAN DADKII DANBADU SAAMEEYEY - ISKU DAY SHAQO LOOGU SAMEEYO WAXYAABAHA SI XAQ AH.
Dhammaan dhinacyada - kuwa ay khusayso, kuwa ay ficilladoodu saameeyeen, iyo bulshada - waxaa la siiyaa fursado macno leh oo ay uga qayb galaan, qaabeeyaan geeddi-socodka, iyo go'aanno.
Kuwa ku lugta lihi waxay kujiraan booska ugufiican si ay u ogaadaan waxa loola jeedo in wax sax loogu sameeyo xaaladooda gaarka ah.
Dhibbanayaasha ayaa go'aamiya heerka ay kaqeybgalayaan geeddi-socod kasta oo dib-u-soo-celin ah.
Dhibbanayaasha waxay fursad u leeyihiin inay ka hadlaan dembiga aragtidooda, aqoonsadaan sida ugu wanaagsan ee baahiyahooda loo dabooli karo si wax looga dhigo sida ugu macquulsan iyaga, iyo qorshaynta jawi nabdoon.
Waxyaabaha la saxo waxaa ka mid ah la socoshada iyo ku qanacsanaanta natiijada.
(Waxaa iskaashi si wada jir ah u sameeyay Shabakada Caddaaladda Bulshada ee VT iyo Ururka VT ee Barnaamijyada Weecinta Maxkamadda, Juun, 2012.)